Vaovao - Andao hojerentsika ny fomba tokony hanaovana ny mankaleo
Ny haavon'ny mankaleo dia avo dia avo, ny refin'ny refin'ny refin-tsara dia mety hahatratra IT8 ~ IT7, ary ny aperture dia azo fehezina ao anaty 0,01mm marina. Raha mankaleo tsara izy io, ny marin-tariby dia mety hahatratra ny TT7-IT6, sy ny kalitaon'ny tampony. tsara. Ho an'ny mankaleo ankapobeny, ny hatevin'ny tany dia 1.6 ~ 0.8 m. Andao hojerentsika ny fomba tokony hanaovana ny mankaleo.
Dingana sy fitandremana mankaleo
Fametrahana fanapahana mankaleo
Tena zava-dehibe ny fametrahana ny ampahany miasa fitaovana mankaleo, indrindra ho an'ny fanitsiana ny asa amin'ny fampiasana ny fotokevitra eccentric. Rehefa avy nametraka ilay fitaovana mankaleo izy dia tsy maintsy mitandrina ny fandinihana ny lozam-pifamoivoizana an'io fitaovana mankaleo io, na eo amin'ny ambaratonga iray ihany izy io miaraka amin'ny fitarihana ny lohan'ilay fitaovana mankaleo? Mametraka amin'ny ambaratonga iray ihany mba hahazoana antoka fa maro ny fanapahana amin'ny zoro milina mahazatra.
Fitaovana mankaleo manandrana mankaleo
Ny fitaovana mankaleo dia hanitsy ny faratampon'ny 0.3-0.5mm arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fizotry ny famokarana, ary ny lavaka fanarenana sy fampifangaroana dia manitsy ny faritry ny boring0.5mm mankaleo mifanaraka amin'ny faritry ny lavaka voalohany. Ny famindram-pahefana mankaleo manaraka dia azo antoka.
Aorian'ny fametrahana sy fampindramam-bola ny fitaovana mankaleo dia ilaina ny manandrana sy manamarina raha mahafeno ny fepetra takian'ny mankaleo ve ny fanesorana ny fitaovana mankaleo.
Alohan'ny mankaleo sy milina, zahao tsara sao ny fitaovana, ny fanondroana ny toeran'ny workpiece ary ny singa fametrahana tsirairay dia miorina sy azo antoka.
Inona ny savaivon'ny lavaka voalohany hatao milina amina calipers? Kajy ohatrinona ny saram-pianakaviana sisa tavela?
Hamarino raha toa ny fahitsiana miverina miverimberina sy ny fahamendrehana mifandanja amin'ireo fitaovana (spindle) mahafeno ny fepetra takian'ny milina alohan'ny mankaleo.
Ny sandan'ny hazakazaka mavitrika amin'ny fampiatoana ny gravity an'ny bara mankaleo dia tsy maintsy voamarina amin'ny fizotran'ny marindrano manampy ny loaka mankaleo hampihena ny fiantraikan'ny herinaratra fanetezana centrifugal amin'ny alàlan'ny fanovana ny masontsivana fanapahana araka ny antonony.
Raha jerena ny mankaleo, mankaleo semi-manja, dingana mankaleo tsara hizarana ara-dalàna ny soso-kevitra mankaleo sosona, mety ny refy mankaleo manodidina ny 0,5mm; mety ho mankaleo, sisiny mankaleo tsara manodidina ny 0.15mm, hisorohana ny antsasa-manina sisin-dàlana mankaleo ateraky ny sisiny be loatra dia avelao ny mpanapaka hisy fiantraikany amin'ny marimarina ny fanitsiana sisiny mankaleo tsara.
Sarotra ny manamboatra fitaovana, manasatra avo lenta (fandeferana ≤0.02mm) dia afaka mampitombo ny dingana fanodinana mankaleo tsara, ny maridrezy mankaleo dia tsy latsaky ny 0.05mm hisorohana ny fanapahana elastika ambonin'ny masinina.
Amin'ny fizotran'ny fitaovana mankaleo an'ilay fitaovana dia tsy maintsy mitandrina ianao mba hisorohana ny ampahany miasa amin'ilay fitaovana mankaleo (lozabe sy antsy antsy) ary ny fiatraikany amin'ny sakana antsy, ny fahasimban'ny lohan-tsofina sy ny lohan-tsofina ary manova ny soatoavin'ny fanitsiana fitaovana misy fiantraikany amin'ny marina ny mari-pana aperture.
Mandritra ny fizotry ny mankaleo dia tandremo mba hitazomana ny fampangatsiahana ampy, hampitombo ny vokan'ny fanosorana amin'ny faritra milina hampihenana ny hery fanapahana.
Ny fanesorana Chip dia tanterahina amin'ny dingana tsirairay amin'ny fikarakarana mba hisorohana ny fandraisana anjara amin'ny chip amin'ny fanapahana faharoa mba hisy fiantraikany amin'ny mari-pahaizana momba ny aperture sy ny kalitaon'ny velarana.
Mandritra ny fizotran'ny asa mankaleo, zahao ny degre amin'ny aborsion an'ny fanapahana (tsipika) amin'ny fotoana rehetra, ary soloina ara-potoana izy io mba hiantohana ny kalitaon'ny aperture amin'ny milina; Voarara ny manasatra ny dingana mba hanoloana ny elatra mba hisorohana ny lesoka; Isaky ny dingana fametahana ny milina, ampiharo amin'ny fomba hentitra ny fepetra takiana amin'ny fanaraha-maso kalitao, tsapao tsara ilay vatan'ny masinina ary manaova firaketana tsara, mba hanamorana ny famakafakana, ny fanitsiana ary ny fanatsarana ny milina mankaleo.